(Dhageyso): Sweden oo soo saartay sharciyo adag oo saameynaya soo-galootiga - NorSom News
Dawladda Sweden ayaa dhawaan soo saartay sharciyo adag oo la xidhiidha arrimaha bulshada, oo si gaar ah u saamaynaya dadyowga soo galootiga ee dalkaasi qoxootinimada ku jooga.
Sharciyadan oo dhaqan galay billawgii bishan July ayay ka mid yihiin, gudniinka gabdhaha, guurka ay qoysasku caruurtooda u dooraan lamaanaha ay guursanayaan, ama hablaha oo wiilal lagu daro iyaga oo aan isa soo dooran.
Waxaa sidoo kale la mamnuucay in gabdhaha loo diido inay guursadaan qofka ay iyagu doortaan.
Halkan ka dhageyso warkan
Previous articleHal maalin: Wadan muslim ah oo cabista khamriga ogolaaday iyo mid aan muslim aheyn oo mamnuucay.
Next articleAskarigii ceejiska dhulka ku dhigay wiilka soomaaliga ee xiran oo hadlay.